IINDIDI ZEPATIO ENCLOSURES (ISIKHOKELO SOYILO) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi Iindidi zePatio Enclosures (Isikhokelo soYilo)
Iindidi zePatio Enclosures (Isikhokelo soYilo)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwiintlobo zokubiyelwa kwepatio kubandakanya iindlela ezahlukeneyo, iindleko kunye noyilo. Nje ukuba imozulu ifudumale kwaye ilanga, abantu bayonwabela ukusebenzisa ipatio yabo yokutya iitrayi, amaqela kunye nokutyelela. Nangona kunjalo, kuxhomekeke kwimozulu abahlala kuyo, ayinguye wonke umntu onethuba lokonwabela ipatio yabo unyaka wonke.
Emva kokuba umninikhaya ethathe isigqibo sokuba bafuna ukusebenzisa ipatio yabo rhoqo, kufuneka baphande malunga neentlobo ezibiyelweyo zeepatio ukufumana ezona ndlela zibalaseleyo. Iipatios ziyaguquguquka, kwaye kubonakala ngathi akukho zimbini ziyafana. Uyilo lwepatio luxhomekeke kwisitayile sasekhaya, ubungakanani, ulwakhiwo, kunye nobukhulu beyadi.
Ukufaka ipatio esele ikhoyo kubandakanya izigqibo ezinje ngohlobo lwezinto zokwakha, ezibonisiweyo okanye iifestile zeglasi, mangaphi amaxesha umninikhaya afuna ukusebenzisa ipatio evaliweyo, kwaye yeyiphi imozulu kunye nezinto eziza kutyhilwa kuyo.
Izipho zokukhumbula unyaka omnye kuye
Ukufaka ipatio kubonelela ngendawo engaphandle esebenzayo yokuphumla nokonwabela ikhaya lakho kunye neyadi. Esi sikhokelo sifundisayo sixoxa ngeendlela zokuvalwa kwepatio, ukhetho, izixhobo, kunye neendleko zokukunceda uthathe isigqibo esona sigqibeleleyo xa usithathile isigqibo sokufaka ipatio yakho.
Izinketho zokuvalelwa kwePatio
Ukuvalwa kwesikrini sePatio
Ukuvalelwa kweglasi yePatio
Ukufakwa kweVinyl Patio
Ukuvalwa kwePatio yeAluminiyam
I-acrylic (iPlastiki) yokuvalelwa kwePatio
Izixhobo zePatio zokuBiyela
Ukuvalelwa kwePatio ebuyisekayo
Ukuvalelwa kwePatio okwethutyana
Ukuvalwa kwamaPatio amaXesha amane
Ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho, i-patio ebiyelweyo inokuba ngumsebenzi olula okanye iprojekthi yokwakha epheleleyo. Isimbozo esilula esifana nophahla oluphezulu sinceda ukukhusela ilanga kunye nemvula elula kodwa ayincedi ukugxotha iincukuthu ezinje ngeengcongconi.
Abanye babanini bamakhaya baxhoma umthunzi woqalo apho ilanga likhanya kwipatiyo ngexesha elishushu lemini. Zonke ezi zinto kulula ukuzenza kodwa aziboneleli sisisombululo esihlala ixesha elide.
Ukuba ikhaya alinayo ipatio okanye iveranda kwaphela, kuya kufuneka kongezwe entsha endlwini. Ukongeza ipatio entsha yinkqubo ebandakanyekayo efuna ukuba ikhontraktha enamava ibeke isamente, ifreyimu yepatio, kwaye ifake uphahla.
Ukuba ipatio ekhoyo incinci, ulwandiso lwepatio luvumela ukongeza indawo kulwakhiwo kwaye inakho okanye ingabandakanyi ukufulela.
Ezi ndlela zilandelayo zivaliweyo zepatio zivumela ukhetho kubanini bamakhaya kwaye zenzelwe ukulungiselela iimfuno ezahlukeneyo zokuvalelwa kwepatio.
Jonga le freyimu yentsimbi kwalenza kunye nokuvalelwa kwescreen kuyo Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Amakhaya kunye namakhaya aselunxwemeni ayaziwa ngokuvalelwa kweepatio ezinkulu ezivumela umoya wolwandle ukuba uqukuqele izikrini ngaphandle kokuvumela iibugs ngaphakathi. Izibuko zesikrini sePatio zivumela abaninimzi ukuba bonwabele ngaphandle nangaphandle xa kunethayo.
Uninzi lwee-patio ezivaliweyo zize ngombala omnyama wealuminium emnyama ephantse ingabonakali kwaye yomelele kunesikrini se-fiberglass esemgangathweni. Ukufakwa kubandakanya kubandakanya ukongeza isakhelo esineenjineli ejikeleze iperimeter kunye nokuqengqeleka kwesikrini ujikeleze isakhelo.
Iscreen sikhuselekile kwisakhelo. Ukuvavanywa kwiipatios kunokutshintshelwa kamva kwiglasi ebiyelweyo yokudala ipatiyo yexesha ezintathu okanye ezine.
Indawo evaliweyo yeglasi yaziwa njengendawo yokulala ilanga kwaye ibonelela ngokukhanya kwendalo okuninzi. Uninzi lweglasi evaliweyo yeglasi yenzelwe ukusetyenziswa unyaka wonke kwaye ibandakanya ukhetho lwendlela yophahla, ukugqitywa kwesakhelo, uhlobo lomnyango, kunye nezinye izinto ezenziwe ngokwezifiso.
Ukuba ikhaya lakho sele linendawo yomgangatho okanye indawo esemgangathweni phantsi kophahla lwasekhaya, iindonga zinokuxhonywa kwaye zilingane neepaneli zeglasi. Ezi ndawo zivaliweyo zeglasi zivumela ipatio ukuba ilawulwe yimozulu ngokufudumeza nokupholisa.
Izibuko zeglasi ezivalelweyo ezingeyonxalenye yophahla lwasekhaya zinokubandakanya uphahla lweglasi oludala i-solarium. Ingqonge yeglasi ivumela ukukhula kwezityalo zemveli kunye nezetropiki kwi-solarium kunye neenkwenkwezi ezijonga ebusuku.
Ukuba iglasi yakho ebiyelweyo yeglasi ifuna ukuhamba komoya, buyisela enye okanye iiphaneli zeglasi ezimbalwa ezineglasi ezigcweleyo kunye neepaneli zescreen.
Ukufakela iveranda okanye ipatio nge-vinyl kwenza indawo efudumeleyo, eyomileyo nekhuselekileyo yokwenza ifenitshala yangaphandle ebusika, imiqamelo, ii-cushion kunye ne-barbecue grills ngexesha lasebusika. Ikwayindlela entle yokwenza indawo yokuhlala eyongezelelweyo kwikhaya lakho.
IVinyl patio ebiyelweyo inokuba yiprojekti yokwenza ngokwakho okanye eyenzelwe isiko kwaye ifakwe yinkampani ebiyelweyo.
IVinyl inokuxhonywa kwisakhelo okanye iqhotyoshelwe ngqo kwisakhelo sepatio. Iiphaneli zeVinyl ezisebenza kumkhondo ofana namakhethini zisebenza kakuhle ukuzikhusela kwisaqhwithi semvula. Okwangoku, aziniki tywina ngokuchasene nemvula okanye ikhephu.
Jonga le khethini ye-vinyl ecocekileyo engenamanzi Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Inketho ebiza kakhulu yokufaka ipatio isebenzisa ivinyl ecacileyo. Yindlela elula yokugcina imozulu ngaphandle kwaye uyonwabele imbono ejikelezileyo.
Cacisa i-vinyl iza ngobuninzi kwaye ifakwe ngeendlela ezininzi. Ukuba ipatio inezikrini, i-20 gauge vinyl yincinci ngokwaneleyo ukuba ingene kwisiteshini esele sikhona. Ukuba wenza ikhava ye-vinyl eyahlukileyo yokubeka ngaphezulu kwescreen, i-30 kunye ne-40 gauge vinyl ibonelela ngokugquma okungcono kwaye ihlala ixesha elide.
Iifreyim zeenkuni ezakhiwe nge-1 ″ x 2 ″ yokubumba ngokulula ukuphuma nokungena ukuze zisetyenziswe ngexesha leenyanga ezibandayo okanye kwimozulu embi. IVinyl ecacileyo yolulelwe ngaphezulu kwesakhelo kwaye ibethelelwe, kwaye ezi freyimu zibekwe ngaphezulu kwezikrini ezikhoyo.
Eyona ndlela isetyenzisiweyo yokufaka i-vinyl ukuvala iveranda kukusebenzisa iigrommets. Cacisa amaphepha e-vinyl kunye neegrommets zisongwe xa zingafuneki okanye zisuswe ngokupheleleyo kwaye zigcinwe.
Xa uvale ipatio, iindlela zokwakha eziqhelekileyo zinokubiza imali kwaye zichithe ixesha. Ngamanye amaxesha ezi ndlela zisenokufuna uhlengahlengiso kulwakhiwo kwikhaya lakho.
Ukuvalwa kwepatio yeAluminiyam akubizi kakhulu kwaye kuza kunye neendonga ezifakwe okanye zibandakanya uphahla lwealuminium. Uphahla lwealuminium lwenziwe ngeepaneli ezitshixiwe kunye, ezenza uphahla lomelele kunye nemozulu.
Iinkqubo zodonga lweAluminiyam zenziwe nge-3-intshi ye-aluminium, kwaye iifestile kunye neminyango iyanqanyulwa eludongeni. Iifestile neengcango ziza nescreen, iglasi, okanye igilasi eqengqelekayo kunye nescreen ukukhuselwa kwimozulu. Iiplati zeAluminiyam azidingi ukupeyinta kwaye zicoca ngokulula.
Ukuba ukuvalwa kweglasi kuvaliwe kuyabiza kakhulu kwaye indawo yokubiyela ye-vinyl ibonakala ngathi incinci kakhulu, ii-acrylic patio ezibiyelweyo lukhetho olufanelekileyo.
Iiphaneli ze-Acrylic zenziwe ngeplastiki eqinileyo engacacanga kwaye ilula ngakumbi kuneglasi. Ezi ndawo zigcinwe ngokulula kwiipatio ezixineneyo ziyamelana nokophuka, kwaye ukuba ziyayenza, aziyophuli njengeglasi, zibenza zikhuseleke.
Iingxaki kunye ne-acrylic patio ezivalelweyo zibandakanya ukutyheli okuvela kukuvezwa kwe-UV, ukukrwela ngokulula, kunye nokuqubuda ngenxa yotshintsho lobushushu kunye nokufuma. Ukuvalwa kweepatio ze-Acrylic kufuna izicoci ezizodwa ukunqanda ukusasazeka.
Kwabanini bamakhaya abazenzelayo, ikiti yokuvalela ipatio inokuba yindlela efikelelekayo nesebenzayo yokuvala iintlobo ezahlukeneyo zeepatio . Iikiti ezivalekileyo zePatio zihlala ziyilelwe ukusebenzisa isiseko esele sikhona sepatio kunye nophahla.
Ezi zixhobo zifakelo olusisigxina kwaye ziza nezixhobo zodonga kuphela. Kumakhaya angenalo uphahla olwandisiweyo ngaphezulu kwepatio, ikhithi eluphahleni oluqinileyo okanye ikhithi ethambileyo. Abanye abavelisi banikezela iikiti zokuvalelwa kweepatio zethutyana, esele zihlanganisiwe kunye nokuma simahla.
Iikiti ezivalekileyo zePatio zifuna indawo eqinileyo nenqanaba njengesilayiti sekhonkrithi, isiseko somgangatho esakhiweyo, okanye umhlaba onzima.
Udonga oluqinileyo kufuneka sele lukhona ekhayeni ukuze uncamathisele indawo ebiyelweyo yeepatio, kwaye uninzi lweekiti lubandakanya iinkqubo ezakhelwe-ngaphakathi kumjelo wamanzi wokuhambisa amanzi. Iikiti ze-Aluminium zokuvalelwa kweepati ngamanye amaxesha zibandakanya isiseko sealuminium.
Indawo evaliweyo yepatio ivumela umninikhaya ukuba asebenzise ipatio yabo kwimozulu epholileyo. Iglasi evaliweyo yeglasi igcina indawo ebandayo kunye nemozulu engathandekiyo ngaphandle kwendawo ebiyelweyo yepatio.
Ngendawo evaliweyo yokubuyisa ipatio, abaninikhaya banezona zinto zibalaseleyo kwihlabathi liphela. Oomatshini ababuyisekayo benza ukuba kuvalwe ipatio ukuvala imozulu embi okanye ngexesha lasebusika. Xa imozulu intle kwaye ifudumele, indawo ebiyelweyo iphinde ibuye ivule.
Izinketho zokuvalelwa kwescreen ekurhoxisweni kubandakanya izikrini ezahlukileyo ezinokurhoxiswa kunye neepaneli zeglasi eziphakanyisiweyo phezulu naphantsi ngolawulo lwamandla.
Ukurhoxisa ukuvalwa kweglasi okuvalelweyo kubandakanya iipaneli zeglasi ezingenasiseko ezihamba kwisilayidi ukuvula nokuvala. Ezi kulula ukuzifaka kwaye azidingi mthombo wamandla. Uninzi lweepatio ezivaliweyo ezinemizila emibini; enye kaloliwe inyukele endlwini kwaye enye kaloliwe inyuswe emhlabeni.
Ukuvalelwa kweepatio ezinokurhoxiswa yeyona ndlela ibiza kakhulu yokuvalela ipatio kwaye kuxhomekeke kwiindlela, ubungakanani, uyilo, kunye nendlela ababuyisa ngayo, ezi ndawo zivaliweyo kufuneka zifakwe ngumakhi onobuchule.
Xa umninikhaya efuna ukuba nepatio eshushu kwiinyanga ezibandayo, ukuvalwa kwepatio yethutyana kuvumela ukhuseleko lobungqina bemozulu kodwa kunokuguqulwa kubuyelwe kwindawo evulekileyo emva kokudlula kwemozulu ebandayo.
Ngamaxesha athile, abaninimzi banqwenela ipatio evaliweyo yokugcina ngaphandle ii-bugs ngelixa ivumela ukuhamba komoya kwimozulu eshushu. Apha ngezantsi kukho iisampulu zokuvalelwa kwepatio yethutyana.
Amakhethini ahlanganisiweyo - Kulula ukuxhoma, ukukhetha imibala kunye neepateni, kwaye kungabizi kakhulu
Iiphaneli zokuwisa - Ilaphu okanye iiphaneli ze-vinyl eziqhotyoshelwe kwipatiyo, akufuneki ukuba zithathwe phantsi, zisongelwe ukugcina
Amakhethini eengcongconi - Kulula ukuxhoma endaweni yovavanyo kwipatiyo, kugcina iingcongconi kunye nezinambuzane, zisuswe ebusika
Iiphaneli zesikrini ezinokususwa -Njengoko kuxoxiwe kwisikrini sepatio evaliweyo, iipaneli zescreen zinokususwa xa zingafuneki kwaye zigcinwe
Iiphaneli zeVinyl Patio -Ngaba ifakwe kwii-grommets okanye njengeepaneli zokuxhoma, ivinyl iyasuswa kwaye igcinwe xa ingafuneki
Cacisa i-vinyl isebenza kakuhle kwipatio esele inophahla kunye nolwakhiwo. Iza kwimiqulu kwaye inokunqunyulwa ukuvala ukuvulwa kwesakhelo sepatio.
Coca indawo evaliweyo ye-vinyl phantse kuwo wonke umoya obandayo kwaye usabonelela ngombono omkhulu. Ivumela ilanga ukuba lifudumise ipatio emini, kwaye xa kufakwa isifudumezi sangaphandle kwipatiyo, indawo ihlala ifudumele ngokwaneleyo ukuba iyisebenzise ngexesha leenyanga zasebusika ezibandayo.
Iipaneli ze-Acrylic zikwanceda ukukhusela ipatio kumaqondo obusika asebusika nakwimozulu embi. Zombini zanele ngaphezulu kwesakhelo sepatio kwaye senziwe ngokobungakanani besiko. Iiphaneli ze-Acrylic zinokususwa kwaye zigcinwe ngexesha leenyanga ezifudumeleyo okanye ezishiyiweyo ukwenza i-solarium yezityalo.
Indawo ebiyelweyo yepatio yamaxesha amane ibonelela ngendawo yokonwabela ukonwabisa unyaka wonke kwaye yenzelwe ukulungiselela ukufudumeza nokupholisa.
Iipatios zexesha ezine zenza inguquko ukusuka kwindawo yokuhlala yangaphakathi ukuya ngaphandle, ivumela abaninimzi ukuba baphume kwigumbi elingaphakathi baye kwigumbi lokukhanya kwelanga elinokukhanya okuninzi kwendalo kunye nembonakalo yendawo entle. Njengokongezwa okusisigxina kwikhaya, ukuvalwa kweepatiyo zonyaka ezine kwakhiwe ukuhambelana nengaphandle lekhaya.
Iglasi esetyenziselwa udonga, kwaye ngamanye amaxesha uphahla, lweparao ebiyelweyo yonyaka ujikeleze iglasi efakwe kwiglasi enefestile enjengefestile. Izakhelo zihlala zenziwe ngealuminium okanye ivinyl kwaye zinokubandakanya izikrini zokujikeleza komoya.
Ukuba ukuphuma kuyafuneka, iingcango zakhiwe kwindawo ebiyelweyo. Ukuvalwa kweepatio zonyaka ezine kubandakanya umbane, ukufudumeza, ukupholisa, kwaye ngamanye amaxesha imibhobho yesinki okanye ibha emanzi.
Ukwakha i-patio ebiyelweyo inokubiza iindleko ukusuka kwi-8,425 yeedola ukuya kwi-25,049 yeedola, kuxhomekeke kuhlobo, izixhobo kunye noyilo. Umndilili wesizwe wepatio evaliweyo yi- $ 16,570. Ukuba ukwakha i-patio ebiyelweyo yamaxesha amane, ixabiso eliphakathi liqala kwi- $ 15,000 ukuya kwi-22,000 yeedola
Amanani angezantsi agubungela ezinye zeepatio ezibiyelweyo, kodwa zininzi ezinye izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa uqikelela iindleko zokuvalelwa kwepatio. La manani asekwe kwi-10 'x 12' ebiyelweyo yepatio.
Uhlobo lwePatio ebiyelweyo Izixhobo Uphahla lubandakanyiwe? Umsebenzi Ixabiso eliphakathi
Gcwalisa ukwakha nge-slab, ukubiyela, ukufulela Inkuni, iglasi, isikrini, ialuminiyam Ewe Ifakiwe $ 20,000
Iglasi yePatio ebiyelweyo Inkuni, iglasi, ialuminiyam Ewe Ifakiwe $ 15,000- $ 22,000.
Ubiyelo lwePatio Umthi, isikrini Hayi Akukho nanye $ 500 yeedola
Ubiyelo lwePatio Umthi, isikrini Hayi Ifakiwe $ 1,200- $ 1,400
IVinyl Patio ebiyelweyo Umthi, ivinyl Hayi Akukho nanye $ 350- $ 500
Izixhobo zePatio zokuBiyela Isakhelo seAluminiyam, iiphaneli zodonga ze-acrylic, iingcango ezityibilikayo, ii-gutters ezakhelweyo, iiphaneli zophahla Ewe Ayifakwanga $ 4,800- $ 6,000
Izixhobo zePatio zokuBiyela Yakhelwe kwangaphambili Hayi Akukho nanye $ 1,000
Apha ngezantsi kukho iindleko ezongezelelweyo xa umisela ixabiso lokufaka ipatio:
Ubungakanani bePatio kunye nendawo
Ukufudumeza kunye nokupholisa iinketho
Izikrini ezihamba ngemoto
Umgangatho wezinto ezisetyenzisiweyo ezinje ngesikrini, i-vinyl, i-acrylic, iglasi
Indawo evaliweyo yepatio inokukunceda wandise indawo yokuhlala ekhayeni lakho kwaye ikuncede ufumane ukonwaba ngakumbi kwindawo yakho. Ukungabi nasigqubuthelo sepatio kuthetha ukuba imvula iya konakalisa i-barbecue. Ilanga elishushu kakhulu kunye neengcongconi zithumela ipati ngaphakathi endlwini. Kwaye utyelelo lokuphumla ekwindla luthetha ukuba wonke umntu osongelwe ngengubo ukonwabela ngaphandle.
Ngaba zikhona iintlobo zovalo lwepatio esilahlekileyo kweli nqaku? Sazise kwingcaciso ukuba loluphi uhlobo olusebenzela wena. Ukufumana umxholo onxulumene noko ndwendwela igalari yethu Izimvo zepatio ezivalelweyo Apha.
Isipho seminyaka eli-11 somtshato
yintoni iqhina elimnyama ngokuzithandela
Uvavanya njani idayimane yokwenyani
Ngubani na uDonald Trump otshatileyo